December 2016 - Sawirrotv
Madaxweynaha Puntland oo Maanta Muqdisho kulan Kula Qaatay Danjiraha Dalka Turkiga (SAWIRRO)
December 31, 2016 – Madaxweynaha Maamulka Puntland mudane, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hawlo shaqo u jooga magaalada Muqdisho ayaa Maanta waxa uu kulan kula qaatay magaalada Muqdisho danjiraha Dowladda Turkiga Mr. Oglan Bekar. Kulankan oo kadhacay xarunta safaarada Turkiga ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa madaxweynaha iyo danjire Oglan Bekar ka wadahadleen arrimo la xiriira …
DEG-DEG: Weerar Goordhow ka Dhacay Gudaha Madaxtooyada iyo Sarkaal ka Tirsan Ciidanka Ilaalada oo la Dilay
December 31, 2016 – Waxaa soo baxaya warar sheegaya in Sarkaal ka tirsan ciidamada Ilaalada ee xarunta Madaxtooyada goor dhow lagu dhex dilay Xarunta Madaxtooyada, iyadoo laba askari oo kalana goobtaasi lagu dhaawacay. Askari ka tirsan Ciidanka Ilaalada Madaxtooyada ayaa waxaa la soo sheegayaa inuu rasaas ku furay sarkaal taliye ku xigeen ka ahaa ciidamada …
Amaantii Trump ee Madaxweyne Putin (VIDEO)
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump uu ku sheegay in Madaxweynaha dalka Ruushka Vladamir Putin uu yahay nin caqli badan. Hadalkan kasoo baxay Madaxweynaha Mareykanka ayaa imaanaya xili Madaxweynaha Ruushka uu diiday inuu dalkiisa ka tarxiilo Diblamaaasiyiin Mareykan ah, waxaana uu sheegay Puntin uusan qaadeyn tilaabadii …
Xildhibaanada Cusub ee Baarlamaanka oo Maanta Isugu Imaanaya Kulan Koodii Labaad
December 31, 2016 – Xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka federaalka ee kuwa Gollaha Shacabka iyo aqalka sare ayaa maanta lagu wadaa inay kullankoodi labaad ku yeeshaan Magaaladda Muqdisho, kaasi oo ay go’aan kaga gaari doonaan xiliga la qabanayo doorashadda Gudoomiyaha Barlamanka iyo mida madaxweynaha Soomaaliya Kulankan waxaa kaloo la filayaa inay ku falanqeeyaan shuruudaha laga doonayo …
Dowladda oo soo Bandhigtay Maydadka Shabaabkii Weeraraka ku soo Qaada Degmeda Afgooye (VIDEO)
December 31, 2016 – Saraakiisha ku sugan Degmada Afgooye ee Gobolka Sh.Hoose ayaa soo bandhigay maydadka rag la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka Al Shabaab oo weerar habeen hore ku soo qaaday fariisimo ay ciidamada Dowladda ku leeyihiin gudaha degmeda Afgooye. Dowladda ayaa soo bandhigtay 3 mayd oo ahaa niman da’ah kuwaas oo kamid ahaa …
Dilka Safiirkii Gariiga oo la Ogaaday In Xaaskiisa ay ku Lug Lahayd (VIDEO)
December 31, 2016 – Booliska magaalada ee dalka Barazil ayaa sheegay in xaaska safiirkii Gariiga u fadhiyay dalkaa Brazil ay qiratay inay shirqooshay saygeedii, iyadoona uu falkaasi gaystay Sarkaal Booliska dalkaasi ka tirsa, oo uu xiriir Jacayl kala dhaxeeyay. Booliska Magaalada Rio de Jenero, ayaa habeenkii Khamiista meydka Amb. Kyriakos Amiridis ka helay gaari gubtay oo …
Cidii Qaarijisay Safiirka Gariiga (VIDEO)
Booliska Magaalada Rio de Jenero, ayaa habeenkii Khamiista meydka Amb. Kyriakos Amiridis ka helay gaari gubtay oo la soo dhigay gudaha xaafadda Nova Iguacu oo ka tirsan magaaladaasi. Evaristo Pontes ayaa tibaaxay in Safiirka la qaarajiyay habeenkii Isniintii, hadana ay baaritaan ku wadaan ula jeedada dhabta ah ee loo dilay, maadaama ninkii booliska ahaa ee …
Maydadka Ragii Weerarka soo Qaaday (VIDEO)
Saraakiisha ku sugan Degmada Afgooye ee Gobolka Sh.Hoose ayaa soo bandhigay maydadka rag la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka Al Shabaab oo weerar habeen hore ku soo qaaday fariisimo ay ciidamada Dowladda ku leeyihiin gudaha degmeda Afgooye. Nuur Xayir oo ah taliyaha ciidanka amniga ee Gobolka Shabeeladda hoose ayaa sheegay in ciidamadu markii hore ay …
Donald Trump oo Amaan Kala Dul Dhacay Madaxweynaha Ruushka ee Vladamir Putin (VIDEO)
December 31, 2016 – Madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa amaanay kala dul dhacay Madaxweynaha dalka Ruushka ee Vladamir Puntin, waxaana uu ku tilmaamay inuu yahay nin wax garad ah oo qaatay tilaabo aad u wanaagsan. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump uu ku …
Abwaan Da’yar ah oo Maansooyinkiisa Uga Faaloonaya Dhalinyarada Sanadkan Jirta (VIDEO)
December 30, 2016 – Abwaankan da’da yar ee ku nool magaalada Hargaysa ayaa suubiya maansooyin yar yar oo Jacbur ah kaas oo uga faaloonayo dhalinyarada sanadkan jirta iyo dhaqamadooda. Wiilkan oo lagu magacaabo abwaan Shucayb ayaa waxa uu iminka dhigtaa galaaska koowad ee dugsiga sare, waxaana maansooyinkiisa badanaa ay ka hadlaan waxyaabaha noloshiisa soo mara, …